News Collection: मध्यराति हिमानी डाँडामा मस्त
पूर्वयुवराज पारस यसपटक काठमाडौंमै रहेको भए साथी–संगीसँग उहाँको रात्रिकालीन शयर कति हुन्थ्यो होला! अनि उहाँको उपस्थितिका कारण डाङडुङ पनि कति चल्थ्यो होला! पारस नेपालदेखि नै वाक्क भएर सिंगापुरतर्फ लागेपछि उहाँका बारे समाचार पढ्न–सुन्न चाहनेहरूलाई खल्लो लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर, पारस काठमाडौंमा नहुनुभए पनि उहाँकी जीवन संगीनी हिमानीलगायत पूर्वराजपरिवारका अन्य नातेदारले यसपटकको होलीमा पारसको अभाव पूर्ति हुन दिएनन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलसमेत नेपालमा नरहेको मौका पारेर पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू फागु पूर्णिमाको मस्तीमा थापाथली हुँदै मध्यरात भक्तपुरको नगरकोटसम्म पुगे।
होलीका दिन निर्मलनिवास शान्त रहे पनि पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू भने पूर्वराजाका भान्जा दिवसविक्रम शाहको थापाथलीस्थित निवासमा जम्मा भएका थिए। त्यहाँ आयोजित 'रमझम' कार्यक्रममा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी आफ्ना तीनजना बच्चाका साथ उपस्थित हुनुभएको थियो। निर्मलनिवासमा भने पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा आफ्नी बच्चासँगै रहेको बताइएको छ। दरबार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका स्व. कुमार खड्गविक्रम शाह र अधिराजकुमारी शान्ति सिंहका छोरा दिवसको निवासमा आयोजित कार्यक्रममा हिमानी र उहाँका बच्चाहरूका अलावा स्व. धीरेन्द्रका जेठी छोरी–ज्वाइँ पूजा शाही र डा. राजीव शाही, कान्छी छोरी–ज्वाइँ दिलाशा राणा र आदर्शविक्रम राणा गत तिहारमा आफ्ना प्रिय जीवनसाथी अविनेश सिंहलाई गुमाउन बाध्य स्व. धीरेन्द्रकी माहिली छोरी शिताष्मा सिंह र कार्यक्रम आयोजक दिवसका दाजु आशिषविक्रम शाह पनि आफ्नी पत्नीसहित उपस्थित थिए। अपराह्नदेखि सुरु भएको खानपिन र नाचगान मध्यराति एक बजेसम्म चलेको थियो। ड्रिङ्ससहितको खानपानका साथ नाचगान बढ्दै गएपछि पूर्वराजपरिवारका युवा सदस्यहरूले भक्तपुरको नगरकोट जाने कार्यक्रम तय गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नगरकोट जाने कार्यक्रम तय भएपछि पारस–हिमानीका तीन छोराछोरीलाई राति १० बजे निर्मलनिवास फर्काइएको थियो। ख्वै किन हो, तीन दिनदेखि पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा निर्मलनिवासमा भए पनि उनी थापाथलीको सो जमघटमा सरिक भइनन्, न त उनका श्रीमान् राजबहादुर सिंह नै सरिक भए। बरु पारस–हिमानीका तीन बच्चालाई थापाथलीबाट निर्मलनिवास फिर्ता पठाइएको एक घन्टा नबित्दै राति ११ बजे राजबहादुरले पत्नी प्रेरणालाई बच्चासहित निर्मलनिवासबाट छाउनीस्थित निवासमा लिएर फर्के।
जानकारीअनुसार मध्यरात नगरकोट पुगेको पूर्वशाही परिवारका सदस्यहरू त्यहाँस्थित क्लब हिमालय होटलमा श्रीमान्/श्रीमतीसहित भए पनि हिमानी आफ्नी विधवा नन्द शिताष्मासँगै १० नं. कोठामा बस्नुभएको थियो। यो टोली भोलिपल्ट पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिर पुगेर अपराह्न तीन बजे काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहे पनि बाटो जाम भएको खबर पाएपछि त्यत्तिकै काठमाडौं फर्केको थियो।
उता, निर्मलनिवासमा कार्यरत पूर्वराजप्रासाद सेवाका कर्मचारी नेपाल सरकारका कर्मचारीमा परिणत भएपछि निर्मलनिवासले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको छ। तीमध्ये दुईजनालाई 'ब्वाइजका रूपमा, पाँचजनालाई नानीको रूपमा, २/२ जनालाई 'बज्यै र पुजारीका रूपमा भर्ना गरिएको स्रोतले बताएको छ।